Short & Long mihazakazaka Multi-axis Industrial Precision Screw Machining | PTJ Shop
Home > Services > Masinina saha
Mihoatra ny folo taona ny fahafaha-manao mifanaraka amin'ny fepetra takiana manokana
Serivisy fanodinana ampahany tsotra sy sarotra ho an'ny indostria fito.
Ny serivisy fanodinam-bidy vita amin'ny indostrialy dia nifanaraka tamin'ny filan'ny indostria mitaky be fangatahana indrindra amin'ny sehatra manokana.SPTJ
dia za-draharaha amin'ny fanarahana fenitra avo lenta sy fepetra takiana manokana rehefa manome famokarana haingana, kalitao ary fihenam-bidy.
Mampihetsi-po ny milaza fa ny indostria rehetra dia mila zavatra mitovy amin'ny mpamatsy milina: fahatokiana tanteraka amin'ny fahafaha-manefa ara-potoana, amin'ny spec ary amin'ny teti-bola. Azo ampiasaina amin'ny implant, fitaovana fanodinana, valves indostrialy petrochemical, fitaovana sarotra, fitaovana fandinihana ary fampiharana hafa.
Na dia tena marina aza izany dia efa nianatra nandritra ny folo taona niasa zava-misy isika fa maro ny fahasamihafana misy eo amin'ny samy hafa no mahatonga ny tetik'ady miaramila na ara-pitsaboana tsy mitovy amin'ny fiara mandeha amin'ny fiara, any ivelany na any ivelany. Ny fianarana ireo fepetra takiana manokana ireo - ary ny famaliana azy ireo amin'ny fomba mahomby - no mahatonga ny PTJ ho safidy amin'ny vokatra milina fanodinam-bokatra, ny famolavolana ny CNC ary ny fametahana ny masinina any amin'ny faritra maro samihafa.
Contact ny Machining Screw masinista anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo faritra sarotra aminao.